लाइसेन्सकाे नयाँ परीक्षा प्रणाली , कुन ठाउँका लागि कति अंक ? - DURBAR TIMES
HomeNewsलाइसेन्सकाे नयाँ परीक्षा प्रणाली , कुन ठाउँका लागि कति अंक ?
लाइसेन्सकाे नयाँ परीक्षा प्रणाली , कुन ठाउँका लागि कति अंक ?
नेपाल सरकारले ज्येष्ठबाट लागु हुनेगरी सवारी साधन चालक अनुमतिपत्रकाे नयाँ परीक्षा प्रणाली सार्वजनिक गरेकाे छ । अब लाइसेन्सकाे लिखित परीक्षामा ८० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्नेछ भने ट्रायल परीक्षामा ७० प्रतिशत अंक ल्याए पास भइनेछ ।
उक्त प्रणाली अनुसार ट्रायलका लागि दिइने ठाउँअनुसारकाे अंक यस्ताे छः
घुमाउराे 8 :- २० अंक
अंग्रेजी अक्षर 8 मा एकपटकसम्म अंकित रेखा छाेएमा ५ अंक काटिने छ भने एकपटकसम्म खुट्टा टेकेमा ५ अंक काटिने छ ।
अंग्रेजी अक्षर 8 मा एकपटकभन्दा बढी अंकित रेखा छाेएमा , सवारीकाे टायर अंकित रेखाभन्दा बाहिर गएमा , एकपटभन्दा बढी भुइँमा खुट्टाले टेकेमा , ठीक दिशाबाट ठीक तरिकाबाट 8 नघुमाएकमा र सवारीकाे स्टार्ट बन्द भएमा फेल भइन्छ ।
साँघुराे फलेक :- १० अंक
भुइँमा टेकेमा अथवा फलेक पार गर्नुअघि नै बाहिर निस्किएमा फेल भइनेछ ।
यू-टर्न :- १० अंक
यू-टर्नमा सवारी टर्निङ इन्डिकेटर लाइट नबालेमा १० अंक काटिनेछ । अंकित रेखा छाेएमा फेल भइनेछ ।
ट्राफिक लाइट :- १५ अंक
ट्राफिक लाइट नियम पालना नगरेमा १५ अंक काटिनेछ ।
उबडखाबड :- १५ अंक
उबडखाबडमा एकपटकसम्म खुट्टाले भुइँ छाेएमा ५ अंक काटिनेछ । त्यस्तै एकपटकसम्म सवारीकाे स्टार्ट बन्द भएमा पनि ५ अंक काटिनेछ ।
उबडखाबडमा एकपटकभन्दा बढी खुट्टाले भुइँ छाेएमा र एकपटकभन्दा बढीपटक सवारीकाे स्टार्ट बन्द भएमा फेल भइनेछ ।
उकालाे :- २० अंक
उकालाेमा अंक काटिने व्यवस्था छैन सीधै फेल भइन्छ । फेल हुने अवस्थाहरूः ताेकिएकाे रेखा नाघी सवारी राेकेमा वा नराेकी अघी बढेमा , राेकिएकाे अवस्थाबाट सवारी अघी बढाउँदा सवारी ६ इन्चभन्दा बढी पछाडि सरेमा , ओरालाे झर्दा ताेकिएकाे रेखाभन्दा अघि राेकेमा वा नराेकी अघि बढेमा र एकपटकभन्दा बढी सवारी स्टार्ट बन्द भएमा ।
व्यवहारगत पक्ष :- १० अंक
सवारी चलाउनुपूर्व सवारीकाे ऐना, टायर, ब्रेकलगायत सामाग्रीकाे परीक्षण नगरेमा ३ अंक काटिनेछ । त्यस्तै हेल्मेट लक नगरी सवारी चलाएमा ४ अंक काटिनेछ । असंयमित तरिकाले सवारी चलाएमा ३ अंक काटिनेछ ।
यसरी विभिन्न ठाउँका लागि छुट्याइएकाे पूर्णाङ्कहरूमध्ये ७० प्रतिशत अंक ल्याएमा सवारी साधन चालक अनुमतिपत्र लिन याेग्य मानिनेछ ।
Previous articleअवैध उत्खनन गर्ने १३ सवारी नियन्त्रण
Next articleसभापति देउवाद्वारा प्रधानाङ्ग र राईको निधनप्रति दुःख व्यक्त